Kalluun Discus loogu talagalay aquariums | Kalluunka
Waxaa jira noocyo badan oo kalluun ah, midkoodna waa saxannada. Kalluunka caadiga ah ee leh cabbirka isbeddelka ayaa ah kuwa ugu caansan ee kaqeybqaadashada filimada dhaqdhaqaaqa.
Kalluunkan Waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah waxayna sidoo kale ka mid yihiin kuwa ugu iibsiga badan, sidaa darteed meeshan waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada faahfaahinta iyo tilmaamaha loogu talagalay ku raaxeyso kalluunkan quruxda badan.
Talooyin arrimaha cuntada, qalab iyo wax dheer iwm. Taasi waxay ku farxi doontaa dadka jecel rikoorka, sida noocyada quruxda badan ee kalluunka, oo leh midabbo muuqaal ah iyo qaabab la mid ah guud ahaan laakiin had iyo jeer taabashadaas gaarka ah maxaa yeelay runti waxay u egyihiin diiwaanno.
Maanta waxaan ka hadli doonnaa kalluun quruxdiisu ka dhigeyso boqorka quraaradda. Waxay ku saabsan tahay…